Maxay Tahay Sababata Uu Sergio Ramos Xaflada Arooskiisa Ugu Casuumi Waayay Saaxiibkiisii Cristiano Ronaldo Ee Uu Gerard Pique & Ciyaartoyda Barcelona Ah Ugu Casuumay? - Gool24.Net
Maxay Tahay Sababata Uu Sergio Ramos Xaflada Arooskiisa Ugu Casuumi Waayay Saaxiibkiisii Cristiano Ronaldo Ee Uu Gerard Pique & Ciyaartoyda Barcelona Ah Ugu Casuumay?
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos iyo gacalisadiisa Pilar Rubio ayaa dhiganaya arooskooda kaas oo lagu sifeeyay in uu noqon doono arooskiisa sanadka isla markaana waxay ku marti qaadeen 500 qof oo u badan dad magac ku leh kubbada cagta iyo dalka Spain.
Sergio Ramos iyo Pilar Rubio ayuu aqal galkoodu dhici doonaa maalinta sabtida ee June 15 waxayna xaflada arooskoodu ka dhici doontaa Xarunta Cathedral ee Niña Pastori oo ku taala magaalada uu Sergio Ramos ku dhashay ee Seville.
Xafladan oo ay fanaan caan ahi si toos ah uga heesi doonaan waxaa lagu marti qaaday shaqsiyaad kubbada cagta caan ka ah iyo waliba marti sharaf ka socota labada dhinac ee Sergio Ramos iyo gacalisadiisa Pilar Rubio.
Shaqsiyaadka xaflada Arooska Sergio Ramos shidi doona waxaa ka mid ah David Beckham iyo xaaskiisa kuwaas oo lagu xusuusto doorkii ay ku lahaayeen xafladii Price Harry iyo Megan ee sanadkii la soo dhaafay.
Dadka kale ee la filayo in ay xaflada arooska Sergio Ramos ka soo qayb gali doonaan waxaa ka mid ah Iker Casillas oo dhawaan wadno xanuun halis ah oo ku soo booday ka soo kabsanaya iyo xaaskiisa Sara Carbonero oo iyada nooc kansarka ka mid ah laga daaweeyay.
Inkasta oo aan wali la xaqiijin ka soo qayb galka Casillas iyo xaaskiisa, haddana waxaa la sugayaa in haddii xaaladooda caafimaad ay u ogolaan karto in ay xafladan ka soo xaadiri doonaan.
Waxa kale oo xaflada arooska Sergio Ramos shidi doona Gerard Pique iyo xaaskiisa ahna fanaanada caanka ah Shakira laakiin inkasta oo Ramos uu Pique oo Barcelona ah iyo xaaskiisa Shakira uu xafladan kusoo casuumay, haddana waxaan la casuumin Cristiano Ronaldo oo ay saaxiibo Ramos ku ahaayeen Real Madrid.
Wararka ayaa sheegaya in Sergio Ramos iyo Cristiano Ronaldo aanu xidhiidhkoodu fiicnayn maadama oo ay iskugu dhaceen markii uu doonayay in uu Real Madrid ka baxo waxayna ilaa hadda wararku sheegayaan in aan Ronaldo xaflada arooska Ramos lagu casuumin.
Madax wayne Florentino Pérez, tababaraha Madrid ee Zinedine Zidane oo kooxda Madrid oo dhamaystiran ayaa ka soo qayb gali doona xaflada arooska kabtankooda Sergio Ramos halkaas oo noqon doonta goob ay ilyartu isqaban doonto.
Waxa kale oo xaflada arooska Ramos lagu casuumay Jordi Alba iyo xaaskiisa Romarey Ventura, Sergio Ramos iyo xaaskiisa Elena Galera laakiin macalinka xulka Spain oo xaalado qoyskiisa ah oo aan la sheegin bilihii ugu danbeeyay ku mashuulsanaa, caawiyihiisa iyo waliba Vicente del Bosque ayaan ka soo qayb galkooda la xaqiijin.
Shaqsiyaadka kale ee magaca leh ee xaflada arooska Sergio Ramos lagu casuumay waxaa ka mid ah Cristóbal Soria, Raúl González, Joaquín Sánchez, Julio Baptista, Roberto Carlos, Fernando Hierro iyo Ronaldo Nazario.
Gacalisada Sergio Ramos ee Pilar Rubio oo ka shaqaysay ‘El Hormiguero ‘ ayaa marti qaad u fidisay dhamaan dadka ay wada shaqeeyaan taas oo la micno ah in uu arooska Ramos ka soo xaadiri doonto Pablo Motos oo caan ka ah Spain.
Warbaahinta Spain ayaa haddaba hadal haysa in aan Cristiano Ronaldo lagu soo casuumin xaflada arooska sabtida dhici doonta ee Sergio Ramos.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay xaqiiq noqoto in Sergio Ramos aanu casuumad u fidin saaxiibkiisii sagaalka sanadood ee Cristiano Ronaldo waxaa markaas cadaan doonta in ay run tahay in khilaaf iyo cadho ay ku kala tageen waqtigii uu Bernabeu macasalaamaynayay.